तपाईंको पछाडि पछाडि तपाईंको बारेमा कुरा गर्ने व्यक्तिहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने - सम्बन्ध
के गर्ने यदि मान्छे तपाईंको पछाडि पछाडि तपाईंको बारेमा कुरा गर्छन्
पेटीनेस र नाटक मानव अनुभवको निरन्तर अंश जस्तो देखिन्छ।
कसैले सोच्दछ कि समय बित्दै जान्छ र नेभिगेट गर्न हामीसँग जीवनका उत्तरदायित्वहरू हुन्छन्, मानिसहरू स्कूलको मैदानमा नाटक र गफ छोडेर जान्छन्।
दुर्भाग्यवस, केही मानिस कहिल्यै हुर्कदैनन् र अफवाहहरू फैलाउन र अन्य व्यक्तिको बारेमा उनीहरूको पछाडी राम्रोसँग वयस्कतामा कुरा गर्न जारी राख्नुहोस्।
एक अफवाहकको गफ विनाशकारी हुन सक्छ, एक व्यक्तिको आत्म-सम्मान मा नकारात्मक असर, र आफ्नो जीवन मा अनावश्यक समस्या पैदा गर्न सक्छ।
यस लेखले तपाइँको पछाडि पछाडि तपाइँको बारेमा कुरा गर्ने व्यक्तिसँग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ।
तपाईंले लिने दृष्टिकोण मुख्य रूपमा यो भइरहेको ठाउँमा निर्भर गर्दछ - तपाईंको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक जीवन।
तर, तपाईंले अफवाहकको बारेमा केहि गर्नु अघि, त्यहाँ लिनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम छ।
तपाईंको जानकारीको स्रोत विश्वसनीय छ वा छैन विचार गर्नुहोस्।
मानिसहरू कहिलेकाँही कहिलेकाँही अण्ड्रेन्ड्ड्ड हुन सक्छन्। जे भए पनि, यो त्यस्तो व्यक्ति होईन जसले खुल्लमखुल्ला तपाईंलाई मन पराउँदैन, जसले तपाईंलाई धोका दिन्छ, यो व्यक्ति हो तपाईंको नजिकको र तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि जो तपाईंको पक्षमा छन्।
तपाईंले जाँच गर्नु पर्ने पहिलो व्यक्ति उही हो जसले तपाईंलाई तपाईको पछाडि पछाडि कुरा गरिरहेको कुरा बतायो।
अन्य व्यक्तिसँग तपाईंको सम्बन्ध बिगार्न वा तपाईंको टाउकोमा पुग्न को लागी को लागी उस्को मनसाय हुन सक्छ।
यो एक कुशलताजनक व्यक्ति को लागी आफूलाई विश्वसनीय को एक छवि को शिल्प बनाउन को लागी एकदम सजिलो छ।
सबै पछि, तिनीहरूले भर्खर तपाईलाई यो अर्को व्यक्तिको बारेमा भने जसले तपाईंको पछाडि पछाडि कुरा गरिरहेछन्! अवश्य पनि तिनीहरू भरोसायोग्य छन्! तिनीहरूले भर्खरै तपाईंलाई त्यो बहुमूल्य जानकारी दिए, हैन र?
त्यसैले जानकारी को स्रोत विचार गर्नुहोस्। आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।
१. यस जानकारी दिंदा जिभिंग दिने व्यक्तिको प्रकारका साथ जिभ दिइन्छ?
संसारमा असंख्य प्रकारका व्यक्तिहरू छन् जुन फरक विचार र दृष्टिकोणबाट तिनीहरू कसरी अरूसँग कुरा गर्छन् भनेर।
केहि मानिसहरु अफवाह फैलाएको पकडमा पर्ने थिएनन्, अरुले व्यक्तिहरुसंग कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत फेसनमा कुरा गर्न नचाह्न सक्छ, र अरुले पनी अर्को व्यक्तिलाई गन्दै प्राप्त गर्न को लागी खोजी गरिरहेका हुन्छन र केहि नाटक सुरु गर्न सक्दछन्।
२. जानकारी दिनेको कार्यको पछाडिको मनसाय के हो?
किन उनीहरूले तपाईंलाई यो जानकारी दिदैछन्? के उनीहरूले तपाईंलाई यो जानकारी दिईन्छ र अविश्वास छर्दै सीधा लाभ उठाउँछन्?
अल्टिरियरको अभिप्राय केवल मनोरञ्जनको लागि नाटक सुरू गर्न चाहने, मित्रता वा सम्बन्ध तोड्ने सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्न, कार्य वातावरणलाई प्रभाव पार्न र व्यक्तिलाई अर्कै दिशातमा बाध्य पार्ने सम्मको हुन सक्छ।
उनीहरूका थप कार्यहरू के हुन्?
एक व्यक्ति जोसँग एक अल्टिरियर मोटिभ छ केहि दीर्घकालिक योजना हुन लागेको छ कि तिनीहरू काम गर्न खोजिरहेका छन्।
तिनीहरूको उद्देश्यहरू सुरुमा स्पष्ट र स्पष्ट नहुन सक्छ, तर यदि तपाइँ ती कार्यहरूको बारेमा जानकारी खण्डन गरे पछि उनीहरूले उनीहरूको मनसायलाई टाढा दिन सक्छन्।
एक व्यक्ति जो अचानक अधिक ह्या hang्गआउट गर्न चाहन्छ वा काममा खुला स्थितिको बारेमा कुरा गर्दैछ उसले तपाईंलाई आफूबाट न हट्न चाहेको दिशाबाट टाढा प्रभाव पार्न खोजिरहेको हुन सक्छ।
ध्यानपूर्वक जानकारीको स्रोतलाई विचार गर्नुहोस्। के तिनीहरू भरोसायोग्य छन्? के तिनीहरू व्यक्तिको प्रकार हो जुन यस प्रकारका ब्यवहारहरूमा संलग्न हुन्छन्?
यदि जानकारीको स्रोतले मस्टरलाई पास गर्दछ भने, त्यसोभए गफसको स्रोतसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने बारे विचार गर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यस्थलमा गफका साथ काम गर्ने
एक व्यक्ति सामान्यतया छनौट गर्न सक्दैनन् र कसले आफ्नो समय उनीहरूको कार्यस्थलमा बिताउँदछ भनेर छनौट गर्न सक्दैनन्।
धेरै जसो समय, तपाई बिभिन्न व्यक्तिको साथ काम गर्नु समाप्त हुन्छ विभिन्न जीवन परिप्रेक्ष्य सहित, जसमा केहि झटका हुनेछ।
अफिसको कार्यस्थलमा व्यवहार गर्ने तरिका अफवाहहरूको गुरुत्वाकर्षणमा निर्भर गर्दछ, कुन कागजातहरू तपाईं निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ, व्यवस्थापन र एचआरको क्षमता, र तपाईं लामो समयसम्म बलिदानको अन्त्य गर्न सक्नुहुनेछ।
१. अफवाहको गम्भीरतालाई विचार गर्नुहोस्।
के तिनीहरू गम्भीर छन्? वा ती चीजहरू छन् जुन बेवास्ता गर्न सकिन्छ र अर्कोतिर ब्रश गर्न सकिन्छ?
के यो तपाईलाई फर्केर आएको सुचारु जस्तो लाग्छ द्वेषपूर्ण छ वा यो गलत सुलभ स्थानबाट आएको हो?
यदि यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ कुनै मिस कम्युनिकेसन थियो, त्यो सम्भावित केहि छ जसलाई सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेर समाधान गर्न सकिन्छ।
संकेत उनी तपाइँको लागी आफ्नो भावनाहरु लुकाइरहेकी छिन्
यदि अफवाहहरु दुर्भावनापूर्ण वा हानिकारक छन् भने, तपाईले यसलाई व्यवस्थापन र HR को साथ लिन आवश्यक पर्दछ।
२. प्रबन्धमा जानु भन्दा पहिले तपाईले जे गर्न सक्नुहुन्छ प्रमाणहरू स Collect्कलन गर्नुहोस्।
के त्यहाँ कुनै प्रकारको कागज ट्रेल वा प्रमाण छ जुन तपाईंको दावीलाई ब्याक अप गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ?
तपाईंले सम्भवतः व्यवस्थापकमा समावेश भएको विश्वास गर्नुहुने सबैको नाम दिनु आवश्यक पर्दछ त्यसैले उनीहरूले आफ्नो अन्तर्वार्ता लिन सक्छन् र के भइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन सक्दछन्।
नाटक कसरी जोगाउने र यसलाई आफ्नो जीवन बर्बाद गर्नबाट रोक्ने
खाई गर्न साथीहरूको9प्रकार (यसको लागि नराम्रो लागी)
१ F नक्कली साथीहरुको संकेत: कसरी एक माइल पट्टी हाजिर गर्ने
To० विषाक्त व्यवहार जुन तपाईंको जीवनमा कुनै ठाउँ हुदैन
Document. तपाईसँग भएको प्रमाण दस्तावेज गर्नुहोस्।
आफैंको लागि प्रतिलिपि बनाउनुहोस् यदि चीजहरू खराब हुँदै जान्छन् वा तपाईं विरूद्ध बदला लिनुहुन्छ।
एक निष्पक्ष र न्यायपूर्ण दुनिया मा, तपाईं आफ्नो दाबी र आफ्नो प्रमाण व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो अवस्था समाधान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, तर हामी निष्पक्ष र न्यायपूर्ण संसारमा बाँचिरहेका छैनौं ।
कहिलेकाँही व्यवस्थापनले गुनासोको लागि तपाइँको बिरूद्ध कार्य गर्दछ। कहिलेकाँही उनीहरूले तपाईंलाई डेमोट गर्ने कोशिस गर्दछन्, तपाईंको घण्टा काट्छन्, वा तपाईंलाई थिच्न दबाब दिन्छन्। कहिलेकाँही तिनीहरू गुनासो को रूपमा पूर्ण रूपमा खारिज हुन्छन् र समय वा प्रयासको लायक हुँदैन।
वास्तविकता त्यो हो आफ्नै लागि खडा कार्यस्थलमा तपाईबाट बर्खास्त हुँदा वा यसको बदलामा बदला लिन सकिन्छ। यदि त्यो हुन्छ भने, तपाईं कुनै प्रमाण उपलब्ध हुन चाहानुहुन्छ कि तपाईं एक वकील मा लिन सक्छ।
यो काम गर्नका लागि रोजगारदातालाई अवैध छ, तर त्यसले निश्चित रूपमा उनीहरूलाई प्रयास गर्नबाट रोक्दैन।
अधिकांश कम्पनीहरूसँग आफैंका दिशानिर्देशहरू र अन्वेषण प्रक्रियाहरू छन् जुन उत्पीडनको दावीहरूसँग व्यवहार गर्ने हो, जुन अफवाह फैलाउने हो।
यो सायद कम्पनीको आकार र उनीहरूको व्यवस्थापनमा फरक पर्दछ। के सबै कम्पनिहरु को लागी सही हो कि तपाइँको विरुद्ध बदला लिनु हुँदैन। त्यस बिन्दुमा, तपाइँ कम्पनीसँग यसको बारेमा कुरा गर्न रोक्न र एक वकीललाई परामर्श गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा गफका साथ काम गर्ने
नाटक र व्यक्तिसँग व्यवहार गर्ने जसले तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा अफवाहहरू फैलाउँदछन्।
यो अफवाह फैलाउने मानिससँग कस्तो प्रकारको सम्बन्धमा आउँछ र कस्तो प्रकारको व्यक्ति हो भन्ने कुरा तल झर्दछ।
कसरी जान्न को लागी केटा छनौट गर्न को लागी
केहि मानिस नाटक सिर्जना मा फस्टाउँछन्। त्यस प्रकारको व्यक्तिसँग सामना गर्नुपर्दा विरलै नै मद्दत गर्दछ किनभने तिनीहरू केवल मुद्दाको वरिपरि आफ्नो बाटो खोल्दछन्।
त्यस प्रकारको व्यक्ति प्राय: आफूलाई आफुलाई के भन्छन् भनेर आफैलाई ती चाँडै टाढा दिन्छ।
व्यक्तिले तपाईका बारेमा के कुरा गर्छ? के तिनीहरु तपाईका साथीहरु र परिवारको बारेमा कुरा गर्छन्?
यदि तिनीहरूले गरे भने, तपाईं पक्कै ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरूले तपाईंको पछाडिको पछाडि अन्य व्यक्तिहरूलाई तपाईंको बारेमा कुरा गरिरहेछन्।
तपाईले आफैंले निर्णय गर्नु पर्छ कि त्यसले तपाई र त्यस व्यक्तिको साथ सम्बन्धको सम्बन्धको अर्थ के हुनेछ।
त्यहाँ दुई भिन्न तरीका छन् तपाई यस दृश्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले कडा प्रमाणको साथ यस व्यक्तिलाई सामना गर्नुभयो भने, उनीहरूले आफ्नो मुख्य ब्यबहार परिवर्तन गर्दैनन्, जसको मतलब तपाईले उनीहरूलाई कुनै महत्त्वपूर्ण चीजको साथ विश्वास गर्न सक्नुहुन्न।
के व्यक्ति परिवर्तन गर्न सक्दछन्? अवश्य। तिनीहरूले बिल्कुल गर्न सक्छन् - तर प्राय: किनभने परिवर्तन कठिन छ वा तिनीहरूले प्रयास गर्न पर्याप्त ध्यान दिएनन्।
सबै तरिकाले, व्यक्तिलाई सामना गर्नुहोस् र एक समाधान खोज्नुहोस् यदि तपाईं मित्रता वा सम्बन्ध बचाउन प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ, तर त्यो कस्तो सफल हुने बारे यथार्थवादी अपेक्षाहरू कायम राख्नुहोस्।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, मानिसहरूमा तपाईंको बहुमूल्य समय वा भावनात्मक उर्जा खेर फाल्ने केही कारण छ जुन तपाईंलाई थाहा छ तपाईं भरोसा गर्न सक्नुहुन्न।
पहिलो विकल्प त्यो व्यक्तिलाई तपाईंको जीवनबाट काट्नु हो।
तर हुनसक्छ त्यो विकल्प छैन जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ। हुनसक्छ ती व्यक्ति रिश्तेदार वा कसैको साथी हुन जो तपाईंसँग सम्बन्धित छ र तपाईं केवल आफ्नो जीवनबाट काट्न सक्नुहुन्न।
त्यो परिदृश्यमा, तपाईं व्यक्तिसँग कति जानकारी साझा गर्नुहुन्छ पनी डायल गर्न सक्नुहुन्छ र ' खरानी रक 'विधि।
जो मानिस अफवाह फैलाउँदछन् र नाटकमा फस्टाउँछन् उनीहरूले आफ्नो कार्यको माध्यमबाट प्राय: कुनै किसिमको उत्साह वा भावनात्मक रिलीज खोजिरहेका हुन्छन्।
तपाईं यसलाई एक ग्रे रक बन्नबाट वञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यो हो, तपाईले रूचिको केही पनि साझेदारी गर्नुहुन्न, कुनै रमाईलो छैन, व्यक्तिगत केहि पनि छैन, कुनै व्यक्तिसँग सतह सतह सतहीता भन्दा कुनै गहिराइ छैन ताकि तिनीहरू तपाईंमा रुचि राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
तपाईं केवल एक खैरो चट्टान हुनुहुन्छ, बोरिंग र अनौंटेस्टि life्ग जीवन जिउँदै।
व्यक्ति सामान्यतया केहि अन्य चम्किलो वस्तुमा आकर्षित हुनेछ र आफैलाई त्यो दिशामा सार्नेछ, तपाईं र तपाईंको ठाउँबाट टाढा।
मैले अफवाह फैलाउने व्यक्तिको सामना गर्नुपर्‍यो?
त्यहाँ आफैंको पक्षमा उभिने र तपाईको आवाज सुनिरहेको निश्चितताको बारेमा धेरै बयानहरू छन्, जुन एक महत्त्वपूर्ण सन्देश हो।
यद्यपि यो सधैं सही सन्देश हुँदैन।
त्यहाँ केहि परिस्थितिहरू छन् जहाँ तपाईं जित्न सक्नुहुन्न र सबै कुरा गर्नाले तपाईलाई ठूलो मूल्य लाग्छ।
मानौं हामी एक जना साथीको सामना गर्छौं जसलाई तपाईले साथी ठानेको थियो र जसलाई तपाईले अफवाह फैलाउनु भएको थियो भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर तिनीहरू कुशल झुटो र छल गर्ने मानिस हुन्छन्।
तपाईं आफैं एक्लै उभिरहेको पाउनुहुनेछ यदि उनीहरूसँग तपाईंको साथीहरू र परिवार तपाईंको विरुद्धमा जान सक्ने क्षमता छ भने।
यदि तपाईंसँग आफ्नो दावीलाई समर्थन गर्न कुनै प्रमाण छैन भने, यो तपाईंको विरूद्ध उनीहरूको शब्दमा परिवर्तन हुन सक्छ, र तपाईंको शब्द हराउन सक्दैन।
द्वन्द्वले तपाइँको साथीहरुलाई महँगो पर्न सक्छ जुन व्यक्तिको झूट मार्फत हेर्न पर्याप्त तात्विक हुँदैन।
कहिलेकाँही तपाईंको लागि खडा हुँदै जान्नु हो कि कहिले तपाईंलाई चुपचाप सेवा छोड्ने हो कि तपाईंलाई अब सेवा गर्दैन।
र एक व्यक्ति जसले जानाजानी तपाईंको पछाडि पछाडि तपाईं बारे अफवाहहरू फैलाउँदै छ सम्भवतः सुरू गर्न एकदमै राम्रो व्यक्ति होईन।
सभ्य मानिसहरूले आफ्नो पछाडि पछाडि अन्य व्यक्तिको बारेमा खराब अफवाहहरू फैलाउँदैनन्।
यदि तपाइँ व्यक्तिसँग टु to्गो गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, कुनै पनि प्रमाण जम्मा गर्नुहोस् जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै च्याट लगहरूको प्रतिलिपिहरू यदि तिनीहरू अवस्थित भएमा।
यदि तपाईंलाई थाहा छ कि व्यक्तिले अफवाहहरू फैलाइरहेको छ भने, उनीहरूले के भन्छन् भनी हेर्न मात्र तपाई उनीहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तिनीहरूले उनीहरूका कार्यहरूमा स्वीकार गर्दछन् वा केवल त्यसबाट बाहिर निस्कन खोज्छन् जुन तिनीहरूको चरित्रको राम्रो उपाय हो।
तपाईं र तपाईंको जीवनको लागि उत्तम दृष्टिकोण निर्णय गर्नुपर्दछ, कि त्यो खुला टकराव हो वा चुपचाप शान्तिबाट जोगिन टाढा हट्नु हो।
क्रोधित पतिले मलाई सबै कुराको लागी दोष दिन्छ
एक सम्बन्ध मा विश्वासघात कसरी प्राप्त गर्ने
कसरी सम्बन्ध समस्या संग एक साथी लाई सल्लाह दिन को लागी
को हो ब्रा व्याट भाई
तपाइँको प्रेमी संग झुट बोले पछि विश्वास कसरी प्राप्त गर्ने
वयस्क मा भावनात्मक अपरिपक्वता को संकेत
डान र फिललाई के भयो